Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ na Beljọm Kevin De Bruyne Nwatakịrị Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-agbanweghị Ihe
LifeBogger na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara amara na aha njirimara; 'Ginger Pele'.
Anyị Kevin De Bruyne Child Story Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Manchester City Football Legend gụnyere akụkọ ihe mere eme ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ndụ ezinụlọ na ọtụtụ OFF na ON-Pitch ihe ndị a na-amaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ otu n'ime ndị na-egwu egwuregwu kachasị mma nke oge a, ma ọ bụ naanị ole na ole maara ọtụtụ ihe banyere Kevin De Bruyne's Biography. Ọ bụ nnọọ ihe na-akpali na Ugbu a, na-enweghị n'ihu ado, ka Malite.
Kevin De Bruyne Nwatakiri Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Nke a bụ Kevin De Bruyne dị ka nwata.
Maka ndị na-amalite akụkọ ndụ, Kevin De Bruyne mụrụ na 28th nke June 1991, site na Herwig De Bruyne (nna) na Anna De Bruyne (nne). Amụrụ ya onye Caucasian White nke mebere obere agbụrụ ọcha nke Belgium. Ọ bụ nwa pụrụ iche, onye a kara aka na ọ ga-abụ onye ukwu mgbe a mụrụ ya.
Erik ten Hag Child Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Akụkọ Na-adịghị Anya
Kevin ji oge mbụ ọ bụ nwata na-eleta Ealing, England ebe ezinụlọ nne ya bi na Africa ebe mama ya si bịa.
Emere ezumike ndị ọzọ na Burundi na Ivory Coast ebe alaka ụlọ ọrụ mmanụ ezinụlọ ya dị. Nna nna ya (site na nne nne ya) bụ nnukwu onye na-etinye mmanụ na Africa.
Kevin De Bruyne Biography - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
Little Kevin malitere ịgba bọl na Drongen, Belgium mgbe ọ dị obere 4 n'obodo ya, Gent ebe ya na ndị mụrụ ya bi. O nwere mmalite egwuregwu ahụ nke ọma.
Ọganihu mba Belgium na-ebili meteoric kemgbe mmalite mmalite ya. O sitere n'àgwà abụọ bụ isi; Nke mbụ bụ ọrụ siri ike na nke abụọ bụ mkpebi siri ike.
Ihe mbụ Kevin De Bruyne nwere stardard sitere na nraranye ya gosipụtara iji ruo ebe dị elu. Hardrụsi ọrụ ike ya n'oge ọ na-eto eto wetara ọtụtụ ihe ịga nke ọma nke na-esote mgbasa ozi. A hụrụ ya dị ka ọdịnihu nke Belgian football.
Kevin na-eto eto bụ nwata a ma ama n'oge ọ bụ nwata.
N'ime oge a, ike gwụrụ Belgium nke ochie nke ndị egwuregwu n'ihi na ndị mmadụ enweghị mmasị na ha. Ha emeghị nke ọma na football.
Obodo a choro mgbanwe nke football site na ala. E gosipụtara Kevin dị ka nwatakịrị nwere ike ibute ụzọ dị otú ahụ.
Nwatakịrị ahụ hụrụ onwe ya na-eche ihu na mgbasa ozi n'oge niile. Ọ ga-eche ọtụtụ nnọkọ mkparịta ụka ihu na mbụ na mgbe ya na egwuregwu ya.
Uzo elu ya na-esote ndi ochichi na ndi ntorobia nke ndi Belgium.
Youthtù ọ bụla na-eto eto chọrọ ya. Kevin nwere ọganihu ngwa ngwa wee ghọọ otu n'ime ndị na-eto eto na-eto eto kachasị amasị mba ahụ.
Na 14, ọ hapụrụ ndụ ụlọ ya na obodo Drongen n'èzí Ghent. N'ebe ahụ, ọ banyere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Genk ma hụ naanị ezinụlọ ya na ngwụsị izu.
Nke a bụ oge ọ mụtara otú ị ga-esi nọrọ onwe ya. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, o metere ndị ezinụlọ lekọtara ya anya. Mgbe ọ dị afọ 14, Kevin nwere ike ijikwa onwe ya.
A naghị akwụ ya ụgwọ nke ukwuu mana jikwaa ihe o nwere. Dị ka Kevin si kwuo, “Ijikwa onwe m ihe nne na nna m kụziiri m. Abụghị m onye na-emefu nnukwu ego na ndụ m.
Ana m edebe ya maka oge ọzọ mgbe m chọrọ ime ihe, maka ezumike - maka na anyị anaghị enwekarị oge ezumike. N'oge a m nọ n'ụlọ. Ana m esi nri onwe m ezigbo nri. Obi dị m anụrị. M bi nanị m site na afọ 14. ”
Ịhapụ ụlọ ka ịchụso nrọ ọrụ ọkachamara ya akwụ ụgwọ. Gị na ọ ka dị obere mgbe o mere mkpebi ahụ.
Maka Kevin, n'ezie ọ na-abịa ogologo oge na obere oge. Nne nne ya nwere mmetụta n'ebe ọ nọ n'ezie. Ọ na-eleta ya ugboro ugboro.
Ndụ Kevin De Bruyne:
Akụkụ a nke akụkọ akụkọ mgbe ochie nke Man City na-agwa gị eziokwu gbasara ndị ezin’ụlọ ya. Ugbu a, ka anyị malite na onye isi ezinụlọ Kevin De Bruyne.
Banyere Nna Kevin De Bruyne:
Nna Kevin De Bruyne Herwig De Bruyne na-elekọta ọrụ nwa ya.
Ijikwa ihe omume nwa ya nwoke n'ụzọ zuru oke emeela ka akụkụ abụọ ahụ baa ọgaranya.
Herwig De Bruyne Snr bụ nwoke azụmaahịa na onye mkparịta ụka kpụ ọkụ n'ọnụ bụ onye rụpụtara nke ọma atụmatụ atụmatụ ọrụ nwa ya nwoke. T
nke ya enwetala mmetụta nwa ya nwoke, si otú a na-eme ka ọ na-enweta ụgwọ ọnwa dị elu ma mekwaa ka mmụba na nkwado nkwado.
Herwig nọkwa na njikere ịkatọ onye ọ bụla na-awakpo ụmụ ya ruo n'ókè ọrụ football ya.
Ọ na-achụpụ ịdọ aka ná ntị ozugbo Jose Mourinho na nkatọ na-enweghị isi ọ na-ekwu banyere nwa ya nwoke. [Ihe zuru ezu NKE José MOURINHO NKE KWESỊRỊ NA-EKWU NDỊ NA-EKWESỊ)
Banyere nne Kevin De Bruyne:
Nne ya sitere na United Kingdom (ebe amuru nne na nna ya) mana amuru ya na Burundi, East Africa ebe otu ulo oru mmanu di na ulo ya. Nke a site na itinye aka pụtara ụzọ nwa ya nwoke ga-esikwa n'Africa.
Anna De Bruyne mụrụ nwa ya nwoke na-agba ụkwụ mgbe ọ dị afọ 18. Nke a na-akọwa ihe mere o ji dị ka nwata. Anna De Bruyne bụ ọkachamara na Petroleum Engineering.
Ọ kpọọrọ nna ya ma na-elekọta ụlọ ọrụ ya na Burundi (East Africa) na Ivory Coast (West Africa).
Anna De Bruyne ji ọtụtụ afọ na-etolite na mba dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa tupu ọ gaa Belgium ebe ọ zutere ma hụ nna Kevin n'anya, Herwig De Bruyne Snr.
Gị nne na nna Anna De Bruyne bi na London Borough of Ealing. Nke a bụ ebe Kevin na nne ya na-eso ezumike Krismas dị ka edepụtara na mbụ.
Banyere ịkwado nwa ya nwoke, Anna De Bruyne na-etinye oge ka ukwuu na-eleta egwuregwu iji lelee ma kwado nwa ya nwoke ka ọ gbaa bọọlụ.
Kevin anaghị aga ụlọ mgbakwasa ozugbo egwuregwu. Ọ na-achọta oge ka ya na mama ya nọrọ. O doro anya, ọ na-enye ya nsusu ọnụ ọkụ mgbe ọ bụla egwuregwu egwuregwu.
Banyere nwanne nwanyị Kevin De Bruyne:
O nwekwara nwanne nwoke aha ya bụ Stefanie De Bruyne. O yiri nne ya mgbe nwanne ya nwoke- nna ha.
Akụkọ nwata Luis Diaz gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ a na-akọghị
Kevin De Bruyne Mmekọrịta Ndụ:
Kevin De Bruyne na - alụ Michele Lacroix ugbu a ka ọ na - ede akwụkwọ. O doro anya na ọ mara ezigbo mma. Ọ bụ paragon nke ịma mma na Ọkachamara. Kevin ama ama enye ke ediwak ntak.
Ha abụọ zutere mgbe ya na nwanne ya nwanyị bụbu enyi ya nọ. Ha zutere mgbe ezigbo enyi ya (Thibaut Courtois) raara ya nye site na-ehi ụra na ya bụbu [Nkọwa zuru ezu n'okpuru].
Kevin enwewo ezigbo obi ụtọ kemgbe mmekọrịta ya na Michele malitere. Ọ bụ ọkara ya ka mma. Michele bụ onye mere ka ọ bụrụ nwoke ọ na-atụ anya ịbụ.
Ọ bụ otu n'ime ihe mere o ji hapụ Chelsea na Wolfsburg. Michele Lacroix bụ nwanyị nke megharịrị obi obi Kevin ma gwọọ mmụọ mmetụta uche ya nke na-achụ ya ogologo oge.
Ọ dịghị eme ihere mgbe ọ bụla iji gosipụta ịhụnanya ya maka ọha mmadụ, karịsịa n'ihu ìgwè mmadụ ahụ.
Nne Kevin na-akwado nkwado mmekọrịta ya na ya. Ha abụọ bụ ezigbo ndị enyi wee hụ ka ha na-ekiri ma na-akwado nwa ha nwoke na enyi nwoke.
Ọbụbụenyi ha bụ otu n'ime ihe mere Kevin ji malite ịlụ di na nwunye na Michelle. Kevin na-achọkarị nwunye ga-adị nso na mama ya.
Na 2016, O zipuru ozi banyere aka ya na Kevin De Bruyne na Instagram. Kevin lụrụ Michèle Lacroix na 2017.
Tupu alụmdi na nwunye ya, Manchester City Star na-agbasi mbọ ike n'ụdị na klọb ya. O wutere ya nke ukwuu banyere arụmọrụ ya.
Alụmdi na nwunye Kevin na Michele bụ ihe mere ka ihu ọchị dịrị ya n'ihu na-eduga n'ịdị ngwa ngwa. Mgbe alụmdi na nwunye ya gasịrị, onye mba Belgium gbaruru onye ọlụlụ ya ka ọ pụọ maka ezumike mmekọrịta ịhụnanya na Paris.
Thou bụ onye a gọziri agọzi site na nwa nwoke tupu alụmdi na nwunye ha nke ha kpọrọ Mason Milian De Bruyne.
Kevin nwere mmasị n'ịhụ otu n'ime otu nwa-nwoke nwoke na-egwu egwu. Ha na-enwe mmasị n'ịga ụlọ.
Dịka nna na-ejikọta ya, enwere ọhụụ ọ bụla nwere oge obi ụtọ.
Kevin De Bruyne akụkọ ndụ eziokwu - Esemokwu na Thibaut Courtois:
Kevin nwere ịhụnanya na Caroline Lijnen. Ha dated maka afọ 3 tupu Thibaut Courtois weda mmekọrịta ha, bụ onye a na-elebu anya dị ka ezigbo enyi nke Kevin. Ihi ụra na enyi nwanyị ya mere ka mmalite nke esemokwu ha.
Nwanyị enyi nwanyị nke Kevin de Bruyne bụ Caroline Lijnen na-ekpughe na ya na ezigbo enyi ya bụ Thibaut Courtois na-aghọgbu ya mgbe Kevin n'onwe ya na ezigbo enyi ya nwere mmekọrịta.
Asịrị banyere ịhụnanya-triangle dị n'etiti Lijnen na Kevin malitere na Eprel 2013 mana ọ kwupụtala ugbu a.
Lijnen gosipụtara na ya na Courtois nwere mmekọrịta chiri anya, onye ọ zutere na Madrid, mgbe De Bruyne kwetara na ya na ezigbo enyi ya ghọgburu ya.
O kwetara na Courtois nyere ya ọgwụgwọ kachasị mma, ụdị ọ na-apụghị inweta site na Bruyne.
N'okwu ya nye Kevin… "Thibaut Courtois nyere m n'abalị ihe ị na-enweghị ike n'ime afọ 3"
O kwuru na Kevin ghọgburu ya nke mbụ wee kwụọ ụgwọ. O kwukwara na ndị mụrụ ya maara aghụghọ ya mana ha enweghị ike ikwu ma ọ bụ kwuo ihe ọ bụla. Kama nke ahụ, ha kwadoro nwa ha nwoke n'ihi na ọ bụ kpakpando.
Dabere na Lijnen n'okwu ya na akwụkwọ ndị Belgium Akụkọ Magazine… ọ sịrị…
“Ekwughị m ihe ọ bụla ruo ọtụtụ ọnwa n'ihi na enweghị m ike ikwu ihe ọ bụla, dị ka nne na nna Kevin kwuru na ha ga-agba akwụkwọ ikpe ma ọ bụrụ na m kọọrọ akụkọ m.
Kevin nwere obi ụtọ ịgwa m na ya na ezigbo enyi m ochie nwere mmekọ. M nyere ya nhọrọ: ya ma ọ bụ m. Adị m njikere inye ya ohere ọzọ, ma mmekọrịta anyị adịchaghị otu mgbe emechara.
N'ezie, a na-enye m nsogbu. Ọ dị m ka a kpọchiri m. Na Ekpebiri m ịgbachi nkịtị. Nke a mere m ji gaa Thibaut ya kacha mma friend maka ndụmọdụ.
Thibaut kasiri m obi ma were ohere iji gosipụta mmetụta ya ọ na-ezobe m. O nyere m ihe m na-anatabeghị n’oge mmekọrịta afọ atọ na Kevin.
O mere ka m nwee mmetụta dị ka ezigbo nwanyị. Mụ na Thibaut, enwere m ike ikwu banyere ihe ọ bụla na ihe niile. Ọbụna ọ kwadebere m nri dị ụtọ. Kevin emetụghị m ya. ”
Ka ọ dị ugbu a, Courtois na de Bruyne anaghị edozi esemokwu ha kemgbe ihe ahụ mere. Nke a bụ otu n'ime ihe mere Kevin ji nwụọ n'ụdị ya na Chelsea FC.
De Bruyne nwere obi nkoropụ banyere ihe ezigbo enyi ya, Thibaut mere ya. Ọ gaara anọ na Chelsea ịlụ ọgụ maka ebe ya. Ma mmetụta uche ya ekweghị ya.
Nke a bụ ihe mere o ji hapụ ụlọ ọrụ na ihe mere ọ ji lọta dị ka onye na-ama ya aka. Mmekọrịta ya na Michele Lacroix gbanwere mmetụta ya.
Kevin De Bruyne Biography Eziokwu - Echiche ya na Premier League:
N'okwu nke Kevin…
“Premier League bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ kacha mma mana ọ na-esiri ụmụ okorobịa ike ịbanye na njikọ. Ahụghị m ọtụtụ ndị egwuregwu bekee na-egwu n'èzí.
Akụkọ nwata Roy Keane gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-adịghị ekwu okwu
Mmetụta nke ndị egwuregwu anyị nọ ebe a na-enyere anyị aka na Belgium. Enwere ike ọ ga - enyekwara ndị egwuregwu England aka ịga mba ofesi. Ndị na-eto eto nọ ebe a na-aga Championship [na mbinye ego].
Eleghi anya ọ ka mma ịga otu egwuregwu kachasị na Germany - nke ahụ bụ ọkwa dị elu n'ezie. E nwekwara ọtụtụ ezigbo ìgwè ma ị nwere ike ịmụ ebe ahụ. Ọ dị mma igwu egwu na Germany karịa ịgba egwu na Championship.
Ugbua anụla m na ndị bekee na-achọ ịnọ na England. Ma eleghị anya, ọ bụ ihe yiri nke ahụ, amaghị m n'ezie. ”
Ikekwe, o nwere isi ihe. Ọtụtụ ụmụaka na-eto eto si mba ndị ọzọ na-eme egwuregwu bọọlụ na Europe abatala nke ọma.
Akụkọ De Bruyne setịpụrụ ihe atụ maka nke a. Ọ nwetara ihe ịga nke ọma na mba ọzọ n'akụkụ ya. Taa, ọ maara nke ọma n'asụsụ atọ bụ Dutch, French na Bekee. Ogologo oge omumu ihe omumu ya.
Kevin De Bruyne akụkọ ndụ eziokwu - ihe mere o ji hụ London n'anya:
Ọ dị mkpa ịmara na ụlọ nna nna Kevin na Ealing dị naanị 10 kilomita site na Stamford Bridge. Ọ nọrọ Christmases ebe ọ bụ nwata.
Kevin so n'òtù ndị Genk na-akpọ Chelsea n'otu egwuregwu Njikọ Njikọ ọtụtụ afọ gara aga. Tupu egwuregwu ahụ, ezinụlọ ya nwere nnọkọ pụrụ iche na London.
Ha na-ezukọ na-ekiri ya na-egwu egwu ụbọchị ahụ. Dị ka Kevin si kwuo, "M hụrụ London n'anya site n'ụbọchị ahụ. Ị nne m nwere echiche Bekee, mana abụ m onye Belgium.
Tim Weah Child Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Akụkọ Na-adịghị Anya
Mkpebi ha mere maka m mere ka ndị ezinụlọ ahụ hụ m n'anya nke ukwuu. Nke a bụ isi ihe mere m ji banye na Chelsea FC. Klọb nke dị nso n'ụlọ "
Kevin De Bruyne na Mourinho Feud:
The Daily Mail na-akọ na Kevin malitere na egwuregwu 5 maka Chelsea na ọ nọ na bench site na egwuregwu 6th.
Mgbe o zutere Mourinho jụọ ya ihe mere o ji nọrọ jụụ Jose Mourinho kọrọ na,
“Kevin, ị naghị azụ ọzụzụ nke ọma. N'ikwu nke a, nsogbu nke mmekọrịta gị na-akpasasị gị mmụọ.
Kwesịrị ịzụlite ndidi na ndụ na bench. Nwee onwe gị ma ị gaghị anọ ọdụ n'oche."
Nke a bụ Jose Mourinho siri ike na-azaghachi ajụjụ ndị Kevin jụrụ.
Akụkọ gosiri na ọ bụ nna Kevin, Herwig De Bruyne kwusiri ike na-achọ ka nwa ya nwoke soro ndị otu egwuregwu gwuo egwu.
Ọbụna ọ haziri ọtụtụ nnọkọ mgbasa ozi iji kwurịta okwu banyere enweghị ohere nwa ya na mmasị ọhụrụ ya ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ. Nke a kpalitere nzaghachi ọzọ Jose Mourinho nke o kwuru….
“Ike gwụrụ m na nsogbu Kevin De Bruyne. Ọ bụrụ na ị nwere onye ọkpụkpọ na-akụ aka n'ọnụ ụzọ gị kwaa ákwá kwa ụbọchị na ọ chọrọ ịpụ, ị ga-eme mkpebi.
Papa ya emeela ka nwa ya bee ákwá ka ọ ghọọ nwa na-ebe ákwá. Ọ bụ nwa iwe na-ewe iwe nke tufuru n'ụdị n'ihi na ọ nweghị ike ijikwa ndụ mmụọ ya
Nna De Bruyne, Herwig De Bruyne mechara chebe nwa ya na Mourinho "Na-eti mkpu nwa" ịkwa emo saying
Noa Okafor Akụkọ nwata gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
“Jose Mourinho na-azọrọ na nwa m nwoke bụ 'nwa iwe' dị njọ nke ya. Naanị na ọ sịrị na ọ chọrọ ịpụ n'ihi na ọ naghị egwu egwu. Ọ bụghị n'ihi ndụ mmetụta uche ya. Echere m na akụkụ ya kwesịrị ịbụ okwu nzuzo. ”
N'ikpeazụ, Chelsea rere ya maka £ 18m na Wolfsburg na Bundesliga.
Kevin De Bruyne akụkọ ndụ eziokwu - na-egosi na Chelsea ezighi ezi:
Mgbe ọ na-egwu Wolfsburg, ọ nwetara ihe mgbaru ọsọ 16 ma 27 na-enyere aka na oge. Nke a nyeere ya aka ịghọ Bundesliga si outfield Afọ Player nke 2015. Nke a gbasoro ochicho ya iji laghachi na Premier League.
Ọ bụ n'oge a ka Chelsea FC kwara ụta mgbe ọ bụla rere ya. Nke a bụ nzaghachi Kevin na ịlaghachi na Premier League.
"Abụ m onye agha. Amụtara m ya na Genk ma mụọ ya na Wolfsburg. Ugbu a, m na-alụ ọgụ ka m laghachi azụ na Premier League. Mgbe m na Manchester City, m ga-alụ ọgụ na ciment ebe m nọ na nke mbụ. M ga-alụ ọgụ iji gosi na Chelsea FC ezighị ezi. "
Nke a n'ezie o meela.
Kevin ya uwe ejiji ya na-akpọ 'KDB'nke na mmekorita ya na uwe ejiji Cult Eleven.
A na-eziga ego sitere na uwe uwe ya na Olympic Pụrụ Iche. Kevin ghọrọ onye nnọchi anya maka Special Olympics na mmalite nke 2014.
Kọmitii 'Special Olympics' nwere ekele dị ukwuu maka Kevin maka nkwado ego.
Nzube ya bụ iji kwado ndị nwere nkwarụ nwere ihe pụrụ iche maka egwuregwu. Kevin etinyewo ego ndị na-akwado ha karịa ka onye ọ bụla ọzọ na-egwu egwuregwu mere.
Akụkọ nwata Bruno Guimaraes gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Daalụ maka ịgụ Kevin De Bruyne Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ!
Pablo Gavi Child Story gbakwunyere Eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Akụkọ nwata Pablo Sarabia gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Akụkọ nwata Steven Berghais gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Akụkọ nwata Lisandro Martinez gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Akwụkwọ akụkọ Genk Football
Akwụkwọ akụkọ Wolfsburg
Akụkọ nwata Savinho gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-adịghị ekwu okwu
Julian Alvarez Akụkọ nwata gbakwunyere Eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Akụkọ nwata Cole Palmer gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-adịghị ekwu okwu
Akụkọ nwata Tino Livramento gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Timothy Castagne Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Akụkọ banyere Botafogo
30 ụbọchị gara aga
DeBruyne bụ ezigbo talent. O doro anya na ụwa XI mbụ. O nwere ihe karịrị igosipụta onwe ya. Belguim ga-abụ ọkacha mmasị na Qatar. N'ihe dị na Mourinho, ụdị abrasive ya ekewapụla ọtụtụ klọb na ndị egwuregwu. N'ụzọ doro anya, nnukwu mmejọ Chelsea sitere n'aka onye njikwa a chụrụ n'ọrụ.
Aha ya bụ Anna Röthlisberger
Anyị na-ahụ ihe nkiri Fussball! Wirklich ein hervorragender Spieler! Obi ekele!
Ikwu: Kevin De Brulyne bụ onye ọkpụkpọ kacha mma m n'ụwa ma ọ bụ onye egwuregwu kachasị egwu nke mba kachasị mma na-etiti ụwa.
Nwere ike 5, 2022